အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်း (cyberbullying) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား?
7689 responded out of 22107 polled
Facebook ပေါ်မှာ post မလုပ်ခင်၊ မ share ခင်၊ message မပို့ခင် သင့်တော်၊ မတော် စဉ်းစားမိပါသလား?
7123 responded out of 7434 polled
အောက်ဖော်ပြပါတွေထဲက ဘယ်အရာကို အင်တာနက်၊ အွန်လိုင်းမှာ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်ပါသလဲ?
5105 responded out of 6250 polled
2138 responded out of 2308 polled
သင် Post လိုက်ခြင်း၊ Share လိုက်ခြင်းကြောင့် တစုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နာကြင်၊ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသလား။
4717 responded out of 4744 polled
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Facebook ကနေတစ်ဆင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းတွေ ဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါသလဲ၊ တစ်ခုရွေးပါ။
4665 responded out of 4701 polled